ဂျူး သုတ်သင်ရေး စီမံကိန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(၁၉၃၃ မှ ၁၉၃၉ ထိ)
နာဇီတို့သည် သူတို့အာဏာစတင်ရရှိသည့် အချိန်မှစ၍ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ဂျူးလူမျိုးများ၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကို ခက်ခဲစေရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကာ နှောင့်ယှက်မှုများကို အစီအစဉ်တကျ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဥရောပတွင် လူဖြစ်ကြရသော ဂျူးတို့၏ဒုက္ခကို အောက်တွင် နေ့စွဲအလိုက် ဖော်ပြထားသည့် မှတ်တမ်းများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပေသည်။
၁၊၄။ ဂျူးတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ဆိုင်များတွင် ဈေးမဝယ်ရန် စတင် သပိတ်မှောက်။ ဂျူးလူမျိုး ဆရာဝန်များ၊ ရှေ့နေများ၊ ကျောင်းသားများကို ဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့။
၇၊၄။ ဂျူးလူမျိုးများ ရှေ့နေရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်။
၁၁၊၄။ ဂျူးလူမျိုးအရာရှိ အရာခံဝန်ထမ်းများသည် အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပေးကြရသည်။
၂၂၊၄။ ဂျူးဆရာဝန်များသည် အစိုးရဆေးရုံဆေးပေးခန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခံကြရသည်။
၂၅၊ ၄။ တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်ကျောင်းများတွင် ဂျူးလူမျိုးကျောင်းသားများကျောင်းဝင်ခွင့်ဦးရေကို ကန့်သတ်ခဲ့သည်။
၄၊ ၅။ ဂျူးလူမျိုးအစိုးရရုံးဝန်ထမ်းမှန်သမျှကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
၁၁၊၁။ ပါရဂူဘွဲ့ကို ဂျူးလူမျိုးတိုင်း လျှောက်ထားပိုင်ခွင့် မရှိတော့။
၅၊၂။ ဂျူးလူမျိုးဆေးကျောင်းသားများအား စာမေးပွဲဖြေခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်သည်။
၂၈၊၂။ ဂျာမန်တပ်မတော်ထဲတွင် ဂျူးစစ်သည်များကို လက်ခံခွင့်မပြုတော့။
၈၊၁၂။ ဂျူးလူမျိုး ဆေးဝါးဗေဒ ပညာရှင်များအား စာမေးပွဲဝင်ခွင့်မပြုတော့။
၆၊၉။ ဂျူးများထုတ်ဝေသော သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ စာစောင်များကို ဆိုင်ပေါ်တင်၍ ရောင်းချခြင်းကို ပိတ်ပင်လိုက်သည်။
၁၅၊၉။ နူးရင်ဘတ်ခုံရုံးမှ "လူမျိုးစုသန့်ရှင်းရေး" ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ကာ ဂျူးလူမျိုးများကို "ဒုတိယတန်းစားလူ" များ အနေဖြင့် အဆင့်နှိမ့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်လူမျိုးများနှင့် ဂျူးလူမျိုးများ လက်ထပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်သည်။
၂၁၊၁၂။ ဂျူး ရှေ့နေများ၊ ဆရာဝန်များ၊ ပါမောက္ခများ၊ ကျောင်းဆရာများသည် အစိုးရအမှုထမ်းဆောင်ခွင့် မရကြတော့။
၁၅၊၁၀။ ဂျူးလူမျိုးကျောင်းဆရာများ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းများတွင်ဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခွင့်မရှိတော့။
၂၆၊၁။ ဂျူးမှန်လျှင် ကျွဲနွားပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရကြတော့။
၅၊၂။ ဂျူးမှန်လျှင် တောလိုက်မုဆိုးအဖြစ် အသက်မွေးခွင့် မရှိကြတော့။
၁၃၊၂။ ဂျူးမှန်လျှင် ကိုယ်ရေးရှေ့နေအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခွင့် မရှိကြတော့။
၁၅၊၄။ ဂျူးမှန်လျှင် ပါရဂူဘွဲ့ကို ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်ထားခွင့် မရကြတော့။
၂၊၇။ စာသင်ကျောင်းများတွင် ဂျူးလူမျိုး ကျောင်းသားဦးရေကို ကန့်သတ်လိုက်သည်။
၂၆၊၄။ မတ်ငွေ ၅၀၀၀ အထက်ပိုင်ဆိုင်သော ဂျူးတို့သည် သက်ဆိုင်ရာသို့ ထိုငွေကြေးပမာဏ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သတင်းပို့ရသည်။
၁၄၊၆။ ဂျူးတို့ပိုင်ဆိုင်သော ဈေးဆိုင်များ လုပ်ငန်းများကို စာရင်းကောက်ပြီး ဂျူးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၂၀၊၆။ ဂျူးအမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့ အစိုးရရုံးများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်မရကြတော့။
၁၁၊၇။ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် အပန်းဖြေအနားယူရာနေရာများသို့သွားရောက်ခွင့်မရှိကြတော့ပေ။
၂၅၊၇။ ဂျူးဆရာဝန်များ ဆေးကုခွင့်လိုင်စင်များ အပိတ်ခံလိုက်ကြရသည်။
၂၇၊၇။ ဂျူးနာမည်ရှိ လမ်းများကို ဂျာမန်နာမည်သို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
၁၀၊၈။ နူးရင်ဘတ်ရှိ ဂျူးတို့၏ ဘုရားကျောင်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသည်။
၁၇၊၈။ အမျိုးသားများ၏ နာမည်ရှေ့တွင် "အစ္စရေးလ်" ဟူ၍လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများ၏ အမည်ကို "ဆာရာ" ဟူ၍လည်းကောင်း ဖြည့်စွက်ခေါ်ဝေါ်ကြရသည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့ကို ခွဲခြားရန် လွယ်ကူသွားစေဖို့လည်း အမှတ်အသားတံဆိပ်များ ထုတ်ပေးထားသည်။
၂၇၊၉။ ဂျူးရှေ့နေတို့ လိုင်စင်များအသိမ်းခံလိုက်ရသည်။
၅၊၁၀။ ဂျူးတို့၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်များကို ပြန်အပ်လိုက်ကြရပြီး ပြန်လည်ထုတ်ပေးသောအခါ အရေအတွက် ကန့်သတ်၍သာထုတ်ပေးသည်။ ကဒ်အသစ်များတွင် "ဂျူး" လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ပုံနှိပ်ပါရှိသည်။
၉၊၁၁။ အစိုးရ၏ စီမံမှုဖြင့် ဂျူးများကို အကြမ်းဖက်ရင်း ဈေးဆိုင်များ နေအိမ်များကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြရာ ဂျူးလူမျိုးပေါင်း ၉၁ ယောက်ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည်။
၁၁၊၁၁။ လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရသည်။
၁၂၊၁၁။ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ပြဇာတ်ရုံများ၊ တေးဂီတရုံများသို့သွားရောက်ခွင့် မရှိကြတော့။
၁၅၊၁၁။ ဂျူးကလေးများ အစိုးရကျောင်းများတွင် ကျောင်းတက်ခွင့် မရှိကြတော့။
၂၉၊၁၁။ စာပို့ခိုများပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခံကြရသည်။
၃၊၁၂။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ အသိမ်းခံကြရသည်။
၆၊၁၂။ ဂျူးလူမျိုး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကို ကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည်။
၁၇၊၁။ ဂျူးလူမျိုး သွားဆရာဝန်များ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များ၊ ဆေးဝါးဗေဒ ပညာရှင်များ၊ သူနာပြုများ မိမိတတ်မြောက်ထားသော ပညာဖြင့် အသက်မွေးခွင့်မရှိကြတော့ပေ။
၁၊၉။ ညမထွက်ရ အမိန့်များ အပြင်မထွက်ရ အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ကာ ဂျူးတို့၏ လွပ်လပ်ခွင့်ကို တားမြစ်ခဲ့သည်။
၁၂၊၉။ ကုန်တိုက်များ၊ အထူးဈေးများတွင် ဈေးဝယ်ခွင့်မရှိကြတော့။
၂၃၊၉။ ရေဒီယိုအသံဖမ်းစက်များ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ကိုပိတ်ပင်ခံကြရသည်။
(Zusammenstellung nach: Günther Ginzel, Jüdischer Alltag in Deutschland 1933-1945, Düsseldorf 1993 sowie Robert Hess, Die Geschichte der Juden, Ravensburg 1988, S. 142 ff.)
("http://www.nz-nothanks.blogspot.com Archived6October 2018 at the Wayback Machine." မှကူးယူဖော်ပြသည်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျူး_သုတ်သင်ရေး_စီမံကိန်း&oldid=639221" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။